Calaamadin: Xagee laga helaa jawaabaha Wiki?
«Sams Teach Yourself Wikipedia 10 Daqiiqo» waa buug caan ah oo uu qoray Michael Miller. Waxay bixisaa jawaab toos ah oo wax ku ool ah oo ku saabsan su'aalaheena ku saabsan Wikipedia, waxaanan baraneynaa sida loo isticmaalo ansixinta tobanka daqiiqo. Waxaan baran karnaa wax walba oo aan u baahanahay si aan u barano Wikipedia oo aan u helno ilo aan fiicnayn oo caan ah. Ilaa hadda, Michael Miller wuxuu ku qoran yahay buugaag cagajugyo ah oo caan ah iyo heeshiiskiisa, iyo cinwaanada caanka ah waa «Sams Teach Yourself YouTube 10 Daqiiqo», «Googlepedia: Hantidhowrka Google,» «Kicin! Tilmaame aan lahayn farsamooyinka loogu talagalay xawaaraha kumbiyuutarrada qalafsan, iyo Tilmaamaha Hagaha Bilawga ah ee Hagaajinta Kumbiyuutarka » - nvr ubiquiti aircam. Qoraaga Tani waxay heshay sumcadda adduunka oo dhan sababtoo ah saxsanaantiisa farsamo, naxariis dhab ah, iyo talo wax ku ool ah. Wuxuu fuliyay shuruudaha dhammaan akhristeyaashiisa
Sidee loo isticmaalaa Wikipedia?
Lisa Mitchell, oo ah Sare Maamulaha Guusha Macaamiisha, wuxuu qeexayaa Wikipedia in uu yahay mid ka mid ah ilaha xogta ugu fiican ee internetka oo dadka isticmaala u ogolaanaya inay wax ka beddelaan. Si aad u ilaaliso qaab nololeedka farsamo ee ku habboon qaab nololeedka, waa inaad isticmaashaa Wikipedia maxaa yeelay waa websiteka ugu casrisan ee casriga ah ee internetka. Waa wax sahlan oo toos ah si aad u gashid wiki-daloolka markaad eegayso Wikipedia. Waxaad raadineysaa jilayaasha doorka ugu wanaagsan ee filimaanta Hollywood, ka dibna waxaad bilowday raadinta xaasaskooda waxayna ogaatay inaysan u aadin dugsiga sare isla markaana bilaabay xirfadahooda waqti hore. Wikipedia ayaa dhawaan soo dabbaaldegtay sannad-guuradii 15-aad, bogguna wuxuu bilaabmayaa inuu bixiyo macluumaad ku filan oo loogu talagalay carruurta qabta shaqooyinkooda iyo shaqo-guriga..Iyada oo ay ku jiraan xogta iyo xogta farahaagta, Wikipedia waa ilaha ugu weyn ee macluumaadka internetka. Its Founder, Ward Cunningham, wuxuu qeexayaa abuurkiisa inuu yahay xogta ugu saxsan iyo sahlan ee ku habboon filashooyinka shakhsiyaadka kala duwan.
Buugiisa, Michael wuxuu baraa sida loo dhexgaliyo fasalka ee fasalada heerar kala duwan. Marka ardaydu si buuxda u kantaroolaan mashaariicdooda, waxaan ku boorin karnaa inay soo eegaan Wikipedia oo waxtar leh.
Sare Saddex Wixii Macluumaad ee Macalimiinta
1. Wikispaces: Qaybtan waxaa loogu talagalay isticmaalka fasallada. Wikispaces waa bog weyn oo u hoggaansamaya aaladda maareynta fasalka oo waxay ka caawisaa macalimiinta iyo ardayda inay bartaan sida loo qorsheeyo hawlaha fasalka iyo mashaariicda si habboon. Ma aha oo kaliya in ay bixiso macluumaad badan iyo sheybaaro, laakiin sidoo kale waa bilaash oo waxay leedahay culeysyo shaqeyn ah. Macallimiintu waxay isticmaali karaan boggan si ay u abuuraan shaqooyin iyo inay wadaagaan khayraadka.
2. Wikidot: Heerka aasaasiga ah, boggani waa bilaash dadka isticmaala, laakiin qaar ka mid ah sifooyinka iyo content ayaa la bixiyaa. Haddii aadan rabin inaad aragto xayeysiisyada iyo xayiraadaha, waa inaad bixisaa qarashka rukunka
3. PBworks: In ka badan 200,000 bogag ku xiran, boggani wuxuu ku siinayaa macallimiinta iyo ardayda fursado badan oo dhiirigeliya barashada ardayda. Sidoo kale, macalimiinta iyo ardaydu si sahlan ayey u dhisaan boggooda waxayna abuuri karaan mashaariic online ah markay marayaan macluumaadka boggan
Adigoo isticmaalaya talooyinka, talo-bixinta, iyo fikradaha laga soo qaatay buugga Michael, waxaad si sahlan u dhexgali kartaa Wikipedia oo aad iskugu duubi kartaa internetka.